Barcelona Oo €100 Milyan Ku Doonaysa Xidig Diirada U Saarnaa Real Madrid, Man United, Juventus Iyo Liverpool. - Gool24.Net
Barcelona Oo €100 Milyan Ku Doonaysa Xidig Diirada U Saarnaa Real Madrid, Man United, Juventus Iyo Liverpool.
Kooxaha Yurub ugu waa wayn ayaa xagaagan ku tartamaya ciyaartoy dhawr ah kuwaas oo noqday xidigaha ugu hadal haynta badan ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maalin kasta iyo goor kastaba looga hadlayo.
Da’yarka kooxda Benfica iyo xulka qaranka Portugal ee Joao Felix waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda xagaagan loogu doonista badan yahay waxaana xiisaynaya kooxaha Yurub ugu waa wayn.
Kooxaha Real Madrid, Juventus, Man United, Man City, Liverpool iyo kooxo kale ayaa qiimayn ku samaynaya 19 sano jirka kooxda Benfica ee Joao Felix laakiin Barcelona ayaa tartankan ugu soo biirtay si ay boqol milyan ugu kharash garayso.
Sida lagu shaaciyay shabakada reer Spain ee Don Balon, kooxda Barcelona ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro Joao Felix iyada oo waliba 100 milyan yuro ku kharash garayn karta.
Qiimaha ay Barcelona ku doonayso saxiixa Joao Felix waxa uu ka badan yahay dalabkii ay Real Madrid kooxda Benfica u dirtay oo ku qiimaysnaa 80 milyan yuro.
Real Madrid ayaa hore u doonaysay in ay Benfica u soo bandhigto qorshe wayn iyada oo Los Blancos diyaar u ahayd in ay 80 milyan yuro ka bixiso Joao Felix balse ay waliba kooxdiisa Benfica u ogolaato in uu amaah ku sii joogo.
Laakiin kooxda Benfica ayaa iska diiday in ay aqbasho dalabka Real Madrid maadaama oo uu aad uga hooseeyay qiimaha lacageed ee lagu burburin karo heshiiska Joao Felix oo 120 milyan yuro ah.
Inkasta oo xataa boqolka milyan yuro ee la sheegay in ay Barcelona ku doonayso saxiixa Joao Felix uu ka hooseeyo lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo, haddana waxa uu ku dhaw yahay lacagtan.
Man United iyo Man City ayaa muddooyinkii ugu danbeeyay ahaa kooxaha inta ugu badan lala xidhiidhinayay saxiixa Joao Felix halka kooxaha Juventus iyo Liverpool ay ka mid yihiin kooxaha xaalda Joao Felix la socda.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Benfica ayay danwayni ugu jirtaa in Barcelona ay soo gashay tartankan maadaama oo ay kooxaha kale ku qasbanaan doonaan in ay markooda sare u soo qaadaan dalbyada ay ku doonayaan da’yarka Joao Felix